Isililo iCorona ihlwitha iqatha emilonyeni yamaciko aseMzansi
NOKUBONGWQA PHENYANE | March 18, 2020
SIKHULU isililo emacikweni akuleli ngemuva kokuvela kwezindaba zokuthi izomiswa imicimbi ngenxa yegciwane iCoronavirus.
Umfelandawonye wezinyunyana zabasembonini yezobuciko, iCultural and Creative Industries Federation of South Africa (CCIFSA), uzwakalise ukukhathazeka ngokumiswa kwemicimbi.
“Kwabasebenza khona, amaciko nabadayisa ukudla kusho ukungangenelwa mali. NjengeCCIFSA siphakamisa ukuthi uhulumeni kube khona inkece oyinika amaciko nabasebenzi ngalesi sikhathi,” kusho umengameli walo mfelandawonye uJoy Mbewana.
Uthe ingxenye yemali yokubhekana nale nhlekelele kumele inikezwe abaculi okuhoxiswe imicimbi abebeqashwe kuyo.
Uthe uzohlangana noNgqongqoshe wezobuCiko namaSiko kuzwelonke, uNathi Mthethwa, ukukhuluma ngalolu daba nokuthi imali kumele ihlukaniswe kanjani.
“Sikhathazekile ngezingane zamaciko esikoleni ezikweletayo nalabo abakweleta izimoto nemizi. Sizohlangana neNedlac (National Economic Development and Labour Council) ukuthola isisombululo,” kusho uJoy.
Osaziwayo emikhakheni ehlukene baveze ukuthi lesi simo sisho indlala njengoba imali ingeke ingene.
Umculi we-hip hop, uNadia Nakai, uveze ukuthi amaciko azobhekana nendlala njengoba kuvalwa imicimbi.
“Lokhu kubi emacikweni njengoba abantu abangaphezu kuka-100 bengasadingeki emcimbini, kunzima.” Umethuli wezinhlelo, * -Ayanda Thabethe, naye uveze ukuthi okuzokwenzeka emacikweni kunzima.
“Iningi lemicimbi obekumele ngibe yingxenye yayo imisiwe, lokhu kusho okubi kuthina maciko,” kusho uMaphorisa.
Umculi wokholo, uMalusi Mbokazi, uthe kubuhlungu ngoba uthola izingcingo kubahleli bemicimbi akade ezoba yingxenye yayo beyihlehlisa. “Le nto ibuhlungu, kade ngithola izingcingo zingitshela ukuthi umcimbi ebengiyingxenye yawo usuhlehlisiwe, lokhu kusho ukuthi sizolamba-ke bakithi,” kuchaza uMalusi.
Umculi kamaskandi, uKhuzani Mpungose, uveze ukuthi isimo kubona sizoba nzima njengoba kungekho la bevuka beye khona beyobamba amatoho.
“Kodwa-ke impilo ibalulekile bakithi, konke okushiwo uhulumeni asikulalelisise, sikwenze njengoba impilo ibalulekile. Lokhu kuhlehliswa kwemicimbi akuzosindisa nje impilo yethu zodwa kodwa neyabo abalandeli bethu abazobe bezosibuka. Siyanxusa ukuthi abantu bahlale ezindlini futhi siyathemba ukuthi ososayensi kukhona abakwenzayo ngokushesha ukuthola ikhambi elizonqanda igciwane,” kuchaza uKhuzani.